Media sy Fanoratan-gazety · Janoary, 2018 · Global Voices teny Malagasy
Media sy Fanoratan-gazety · Janoary, 2018
Tantara mikasika ny Media sy Fanoratan-gazety tamin'ny Janoary, 2018
Manao Fihetsiketsehana Ny Bilaogera Filipiana Hiarovana Ny Tranokalam-Baovao Rappler
Azia Atsinanana 30 Janoary 2018
"Mijoro manohitra ny fihetsika fampanginana sy fandrahonana ny mpanao gazety, ny bilaogera ary ireo matihanina amin'ny fampitam-baovao izahay satria tsy tia fotsiny ny vaovaony sy ny fomba fijeriny ny Filoha sy ireo mpanohana azy."
Ilay Fahafatesana Tsy Voafaritry ny Fotoana An'ilay Mpanao Gazety Ethiopiana Tany An-tsesitany
Afrika Mainty 30 Janoary 2018
Niasa ho mpanao gazety ara-panatanjahantena sy politika nandritra ny efa ho folo taona i Ibrahim, raha tsy hoe voatery nandositra izy tamin'ny taona 2014. Tsy irery i Ibrahim, izay namoy ny ainy teo amin'ny faha-40 taonany.
Maraoka, Israely ary Palestina : Tantara Iray Tsy Manam-paharoa
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny May 2008) - 60 taona lasa izay, nanombohan'i Nakba sy fitakian'i Israely ny fahaleovantenany lasa nanana fifandraisana mahaliana i Israely sy Maraoka. Talohan'ny nananganana ny fanjakana Israeliàna, nanana mponina Jiosy maro, no sady nihanaka be i Maraoka. Ireto misy hevitra vitsivitsy avy amin'ireo blaogera Maraokanina momba izany, amin'izao faha 60 taona nahazoan'i Israely ny fahaleovantenany izao.
Nanome Baiko Hanakatona Ny Tranonkalam-baovao Rappler Ny Manampahefana Filipina, Voatohintohina Ny Fahalalahan-Gazety
"Raha misy ity fanesorana fahazoan-dalana ity, hikatona tanteraka ny Rappler - fikambanam-baovao sambany hakaton'ny hetsika ataon'ny governemanta hatramin'ny nanambaran'ilay mpanao didy jadona Ferdinand Marcos ny lalàna miaramila tamin'ny taona 1972."
Fahanginana sy ny Rariny Ao Caracas
Amerika Latina 24 Janoary 2018
Mazava ho azy fa ny tantara goavana manerana ny kaontinanta dia ny fahalanian'i Hugo Chávez indray ao Venezoela tamin'ny vato 60%. (Marihana fa efa tamin'ny volana Desambra taona 2006 ny lahatsoratra teny Anglisy)
Tamin'ny Taona 2017, Nataon'ny Parlemantan'i Samoa Ho Heloka Bevava Ny Fanalàm-baraka. Ahoana Ny Fiantraikan'izany Amin'ireo Bilaogera sy ny Media Sosialy?
Oseania 23 Janoary 2018
Tsy tokony hanakana ny zon'ny olom-pirenena hiresaka malalaka, sy tsy matahotra ny hogadraina ny ahiahy mikasika ireo bilaogera tsy fantatra anarana.
Miezaka Mandika Ilay Tenin'i Trump Hoe “Shithole” Ny Fampitam-baovao Japoney
Azia Atsinanana 23 Janoary 2018
Mahavariana fa mora kokoa ho an'ny sehatra fampitam-baovao ny namoaka ny "shithole" noho ny "mpanavakava-bolonkoditra" na ny "fanavakavaham-bolonkoditra".